Kianja Square sy Rectangle Tin boatina ho an'ny famonosana fanomezana ary mpanamboatra | Byland
[Bika]: Kianja, mahitsizoro, boribory ary tsy ara-dalàna, sns.
[Fampiasana]: sakafo, fanomezana, zavatra simika. etc.
[Fitaovana]: Nahazo fankatoavana tinplate kilasy, na ambaratonga sakafo na SGS.
[Hatevina]: 0.21 ~ 0.35mm dia miankina amin'ny habe na amin'ny takian'ny mpanjifa.
[Fampiasana]: sakafo, fanomezana, zavatra simika. sns
[Size]: raikitra ny lavany sy ny sakany ary azo ahitsy araka ny ilainao ny haavony.
Misy habe namboarina raha tsy mety amin'ny vokatrao ny bobongolo efa misy.
[Loko]: Ny endriny sy ny sary famantarana rehetra dia azo soratana eo ambonin'ny boaty tin, CMYK na PMS araka izay ilainao
[Coating]: Famonoana fiarovana, ary hamaranana mifanaraka amin'izany ny shinny na ny matt
[Famonosana]: Carton ho an'ny Pallet ho fiarovana tsara kokoa ho an'ny vina.
[MOQ]: 5000 ~ 25000 pcs arakaraka ny habeny.
[Fotoana fitarihana santionany manokana]: 7 ~ 10 andro ho an'ny bobongolo efa misy
15-20 andro ho an'ny bobongolo vaovao aorian'ny fanamafisana ny lasitra fanaovana sary sy ny fahazoana ny sarany bobongolo
[Fotoana famokarana famokarana]: 25 ~ 30 andro aorian'ny fanamafisana ny santionany na miankina amin'ny habetsahana.
[Fe-potoana fandefasana]: EXW, FOB na CIF
[Fe-potoana fandoavam-bola]: T / T 30% toy ny fandoavam-bola mialoha, ny vola mizana dia aloa alohan'ny fandefasana.
[Fanamarihana]: Coca Cola, andry SEDEX Disney, SA8000, ISO9001, ISO14001, BRC, NBCUniversal, sns,
[Maninona no mifidy fonosana tin]: fonosana mivarotra vokatra
Ny mpanjifanay dia mifidy fonosana vifotsy noho ny antony maro samihafa. Ireto ambany ireto no re matetika matetika momba antsika:
1. fonosana fanomezana tsy mila fonosana faharoa
2. Marika, fanangonam-bola, sandam-bola heverina ho ambony
3. fonosana fiarovana
4. Fiorenan'ny talantalana
5. 100% azo averina namboarina ary vita amin'ny vy voaverina
6. Mahasarika maso amin'ny sehatry ny mpifaninana feno olona
[ADVANTAGE]: Antony efatra hisafidiananao an'i land Can ho mpamatsy anao:
-Mihoatra ny 15 taona ny traikefa amin'ny sehatry ny fanontana pirinty sy ny famokarana
-5 tsipika famokarana mandeha ho azy ho fiantohana kalitao sy fandefasana ara-potoana.
-Drafitra sary matihanina, fivoahan'ny sarimihetsika, sary 3D ary serivisy fanatobiana hevitra
-Fitaovana tontolo iainana sy teknolojia fanontana isan-karazany.
[Fampirantiana sy fampisehoana iraisam-pirenena]: Amin'ny alàlan'ny tanety Afaka manatrika ny Canton Fair sy seho famonosana iraisam-pirenena vitsivitsy any Guangzhou sy Shanghai isan-taona.
1. Orinasa mpanamboatra orinasa ve ianao?
A: Niorina tamin'ny taona 2005 izahay, natao manokana amin'ny fanaovana boaty sy kapoaka kalitao avo lenta, izay ampiharina amin'ny sakafo, fanomezana, kosmetika, kilalao, sns. Ary manana atrikasa maoderina roa misy 30000 metatra toradroa izahay.
2. Manana tahiry ve ianao, afaka maka santionany ve aho? Ahoana ny fakana santionany?
A: Eny, ny ankamaroan'ny entanay dia ao anaty stock, raha mila maka santionany ianao dia lazao anay fotsiny ilay entana, habe, loko ary habe, mba hahafahanay mijery ny vidin'ny fandefasana anao.
3. Inona ny MOQ?
A: Manolotra MOQ ambany izahay hanampiana ny mpanjifa hanokatra tsena, maniry ny hanangana fifandraisana orinasa maharitra amin'ny mpanjifanay izahay.
4. Inona ny fotoana famokarana ataonao?
A: mitazona mpiasa maherin'ny 600 izahay, tsipika fanapoahana 30 miaraka amin'ny vokatra isam-bolana 6 taonina isam-bolana, miaraka amin'ny tsipika famokarana mandeha ho azy natomboka tamin'ny 2012, afaka mihaona ny fotoana fandefasana fohy izahay ao anatin'ny 20-30 andro.
5. Azonao atao ve ny mamorona endrika ho anay? Ahoana no ahafahantsika miroso raha toa ka mila ampanjifaina ny fangaronay amin'ny entana efa misy izahay?
A: Ekena ny endriny namboarina, ny habe, ny endriny, ny fanontana ary ny fananganana dia namboarina, afaka manolotra fanampiana izahay hanao sary ara-teknika sy sary 3D mifototra amin'ny hevitry ny mpanjifa alohan'ny hanaovana bobongolo vaovao.
Previous: Voahangy voasinton'ny peratra ho an'ny sakafo fonosana sy vovoka formula_milk
Manaraka: Tinplate dia afaka miaraka amina aluminium EOE voaisy tombo-kase amin'ny famonosana labiera vaovao
4Liters (1gallon) tin ho an'ny fonosana maotera o ...
Custom 20Liters Paint tin pails - Famoahana ...
Metal Tin Cans-Container ho an'ny fonosana Car Wax ...